Booliska Louisiana Oo laad la dhacay, kaddibna jiiday Nin Madow Oo ku dhintay xabsiga - #1Araweelo News Network
Booliska Louisiana Oo laad la dhacay, kaddibna jiiday Nin Madow Oo ku dhintay xabsiga
Louisiana(ANN)-Askari ka tirsan booliska Louisiana ayaa laad la dhacay oo jiiday nin Madow oo katiinadeysan, kaas oo ku dhintay gacanta booliska.
Sidaana waxa laga soo xigtay diiwaanka booliska ee cusub oo muujinaya. dhacdadaa.
Dhimashada Ronald Greene weli lama sharixin, waana mid mowduuciisu ku jira baadhis ku saabsan xuquuqda madaniga ee federaalka.
Master Trooper Kory York, ayaa Greene kaga jiiday caloosha silsilado, waxaana la hakiyay rabshadaha iyo gaadiidka xawaaraha sare ku soconaya oo dabagal lagu samaynayo.
Wakaalada wararka ee Associated Press ayaa heshay diiwaanada Booliska gudaha, waxayna xustay in ay astaan u tahay aqoonsigii ugu horeeyay ee dadweynaha ee Booliska Gobolka in Greene si xun loola dhaqmay.
Diiwaanadu waxay xaqiijinayaan faahfaahinta ay bixiyeen sannadkii hore qareenka qoyska Greene oo eegay muuqaal kamarad ah oo muuqaal ah oo lagu xidhay May 2019.
Waxaa laga arki karaa fiidiyowga in askartu ceejiyeen oo garaaceen Greene, iyagoo si isdaba joog ah ugula hadlay qoryo, isla markaana ku jiidaya wejigiisa laamiga, sida uu qareenku u sheegay AP.
Saraakiisha Booliska Gobolka,ayaa si isdaba joog ah u diiday inay fagaaraha soo dhigaan sidii wax u dhaceen, iyagoo aan dooneyn inay ka hadlaan dhimashada Greene.
Mark Maguire, oo ah qareenka xuquuqda madaniga ah ee Philadelphia oo wakiil ka ah qoyska Greene ayaa yidhi “Hadda muran kuma jiro in Trooper York uu ka qayb qaatay weerarkii naxariis darrada ahaa ee galaaftay nolosha Ronald Greene.”
“Baadhitaanku waa bilow laakiin kuma dhowaanayso hufnaanta iyo la xisaabtanka buuxa ee ay qoysku sii raadinayaan.”
Louisiana waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu xun ee xagga nolosha marka loo eego Magaalooyinka kale ee Maraykanka, waxayna ku jirtaa kaalinta labaad ee ugu xun nolosha Maraykanka.
Gobolka Louisiana, ayaa ku yaal koonfur-bari Maraykan oo ku yaal Gacanka Mexico, waxaana ku nool dad kasoo jeeda Fench, African, American and French-Canadian, waxayna ka mid ahayd goboladii Faransiisku guumaysan jiray.
Turkiga Oo Isballaadhinta NATO Ka Dhiidhiyay Finland Iyo Sweden Oo Xaallad Murugsan Galay
Madaxweynihii Dalka Imaaraadka Sheikh Khalifa bin Zayed Oo Geeriyooday Iyo Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay
Wasiirka Arrimaha Dibadda Jarmalka Oo Booqasho Qarsoodi Ah Ku Tagtay Kyiv